Okuthunyelwe Kwamuva KuMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-28 May 2020	• 7 Amazwana
Kuvela imisindo eminingi ngokwengeziwe yokuthi ama-coronavirus kungenzeka ukuthi aklanywa elebhu. Lapho ngihlaselwa khona ekuqaleni ngababizi beqiniso baseNu.nl, lapho ngiveza ukuthi la magciwane angaqhamuka elabhorethri, manje sekuyiyona mithombo yezindaba efanayo ebika ukuthi […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-26 May 2020	• 3 Amazwana
Ezinyangeni ezisanda kwedlula, isigamu somhlaba besesaba kakhulu isitha se-coronavirus esingabonakali. Iningi alazi ukuthi abezindaba nezepolitiki, ngokubambisana nophiramidi wamandla (obelokhu bemile kusukela kudala), banquma umbono wezwe lethu. Cishe konke esikubonayo ngakho-ke sikholelwa ukuthi kunemibala njenge […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-25 May 2020	• 14 Amazwana
Anginayo i-iPhone ngakho angikwazanga ukuyibheka, kepha iwebhusayithi ye-Apple icacile ngakho. Ngeshwa, bambalwa abafunda imigomo nemibandela ngaphambi kokufaka isibuyekezo noma uhlelo lokusebenza, kepha uthola nje uhlelo lokusebenza lokulandela ngomkhondo kufakwe kusibuyekezo se-iOS 13.5 sakamuva. Uma ungibuza, […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-22 May 2020	• 13 Amazwana
Emizuzwini engama-33 elandelayo, bheka uMaurice de Hond, indoda ngemuva kwamavoti amakhulu esizwe "esingamethemba ngokuphelele". UDe Hond uthole ukuthi ucwaningo oluthile lukhombisa ukuthi lo mthetho owodwa nohhafu wokubusa awunamqondo nokuthi i-coronavirus ikakhulu isakazeka lapho umoya omncane ungekho kahle. UMaurice uqinisekile ngokuqinile […]
Uma ulandela abezindaba, akunankinga neze eNetherlands ngaphandle kwegciwane le-corona, eliqhubeka likhala njengebhomu lesikhathi sokushaya. Buphi ubuntatheli uma kuziwa ngokuveza ukuhlupheka komuntu uqobo emuva kweminyango yangaphambili yabaningi? Akunzima kangako ukuthola izibalo ze-RIVM […]
"Uhulumeni ucela ukuthi senze lokhu bese ngilandela u-'Befehl ist Befehl '. Kufanele unikeze igama lakho nenombolo kamazisi ukuze ukwazi ukulandelela ukuthi ngubani oxhumana naye. Uma ungakwenzi lokhu, ungahle ungangeni esitolo, kepha ungathenga nathi online ”. Kulungile […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-18 May 2020	• 12 Amazwana
Ngokukhishwa okulandelanayo okujwayelekile kwegolide kanye nokwejwayelekile kawoyela, idola lajika laba yimali ezoprintwa ngaphandle kwemikhawulo. Siyibiza ngemali yeFiat. Imali yeFiat ayilungile ngokuhweba kwamanye amazwe. Ngemuva kwakho konke, ukuphrinta amakhulu ezigidigidi kubangela ukwehla kwemali. Ngoba ibhange eliphakathi lase-US (i-FED) lilawula le nqubo yokudalwa kwedola nedola […]
Intando yeningi eqondile yisixazululo esisabekayo lapho uhulumeni waseDashi ebeke izwe lethu khona. Luhlobo lwentando yeningi lapho abantu bakhetha ngqo abamele babo ngokuvota online (kuvikelwe). Abantu abanokuhlelwa kabusha nobuholi bavotelwa. Umuntu onamavoti amaningi uwina ophethe ungqongqoshe. Okufanayo kuhamba […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-14 May 2020	• 5 Amazwana
Ungabanjwa ugibe lwezezimali, njengoba kugqugquzelwa nguRobert Jensen ekusakazweni kwakhe kokugcina, kepha kwenzekani ngemali yakho? Nami, ngacelwa ukuxhaswa ngumsunguli weBond ngokumelene nezindaba zikaHulumeni, uJordy Zwarts (bheka isithombe), kodwa ngesenzo esifanayo ngokumelene ne-5G unamanje […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-14 May 2020	• 45 Amazwana
Kancane kancane, abantu abaningi bayaqala ukubona ukuthi ohulumeni emhlabeni wonke bafuna ukwenza izinguquko ezingapheli emphakathini wonke. I "smart Lockdown" iguqulwa kancane kancane ibe yaphakade, lapho kufanele uyithenge kabusha inkululeko yakho. Okujwayelekile okusha kuba yimitha nengxenye yomphakathi futhi kufanele uzikhokhele ngokwakho. Ungaqasha abaluleki abizayo ku- [...]
Ukuvakasha okuphelele: 2.491.593
SandinG op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003